Izindaba - Lokhu kubanikeza indlela yokuhlangana nokugibela ibhayisikili
Izingane zigijime zaphuma emizini yazo zabona iloli lime ngaphandle, ligcwele amabhayisikili nezigqoko ezinemibala ehlukene nosayizi.
Namuhla, amaGiya kaSwitchin kanye ne- “Every Child's Bike” amlethele isigqoko esiphinki nebhayisikili elimbozwe ama-mermaid, abelokhu efuna kusukela ngoMashi.
Njengoba abantu abaningi ngokwengeziwe behlala emakhaya futhi beshintshela emidlalweni yangaphandle, isidingo samabhayisikili sinyukile. Ngenxa yempi yezohwebo, abakhiqizi abaningi abakakulungeli okwamanje.
UDusty Casteen, inhloko yeSwitchin'Gears, uthe: “Awekho amabhayisikili amaningi angena ezweni lethu, ngakho-ke sizama ukuvuselela amabhayisikili esiwatholayo. Bathumele ukuze ubangenise emphakathini. Woza ujabule ngokwengeziwe. ”
“Ngicabanga ukuthi kuzosiza izingane eziningi nokuzikhipha osizini lwazo, uyazi? Angicabangi ukuthi abantu bazobona ukuthi nabo balahlekelwe ngumphakathi. Lokhu kubanikeza indlela yokuhlangana nokugibela ibhayisikili. ”